Naing BSell | Item - 23in1လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စက်နှင့်စက်ဘီး
ဆေးနှင့် ကျန်းမာရေး ပစ္စည်းများ
Moon Angel Online Shop.
More from "Moon Angel Online Shop."
Night View Glasses(ညကြည့်မျက်မှန်)
Boyan shampoo set
23 in 1 လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စက်နှင့် စက်ဘီး
အမျိုးသား အမျိုးသမီးမရွေ6းPack တွေ ခေတ်စားနေတယ်နော် ....
GYM ဆော့ဖို့အတွက် အထူးတလည် Health Center တွေသွားဆော့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်
Six Pack Care Exercise Machine လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
23 မျိုးဆော့လို့ရတဲ့ 23 in 1 လေးပါ
Body Builder အချိုးကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက် ဖို့၊ ကျစ်လျစ်လှပစေဖို့နဲ့ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး ပိုမို ကောင်းမွန် လာစေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံကို စက်တစ်ခုထဲနဲ့ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်လျှင် ၄၅မိနစ်ခန့် ပုံမှန် လေ့ကျင့် ပေးရုံဖြင့် မြင်သူ ငေးလောက်သော အချိုးအစားကျသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖန်ဆင်းပေးပါလိမ့်မယ်
ကျား မ မရွေး အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Six Pack Care Exercise Machine စက်ကိုအသုံးပြုဖို့ အတွက် ဖြုတ်တပ်ချိန် ၅မိနစ် နဲ့ပြုလုပ်နိုင်သလို အသုံးပြုပုံကလဲ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။အိမ်တွင် သိမ်းဆည်းဖို့နေရာကျယ်ကျယ်လဲမလိုသလို မိမိအသုံးပြုပြီးပါကပြန်ပြီးခေါက်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်
ယခင် 22 in 1 စက်များထက် ပိုသာသည့်အချက်မှာ
အိပ်ထမတင်ရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာ အကြီးအသေးနှင့် အင်အားပေါ်မူတည်၍ တွန်းကန်အားကို လိုသလို ထိန်းညှိနိုင်ရန် အားကောင်းသည့် စပရိန်၆ချောင်းပါရှိပြီး ၂ချောင်း၊ ၄ချောင်းသာ ထည့်၍လည်း သုံးနိုင်သဖြင့် အားနည်းသောသူများပါ အလွယ်တကူ လေ့ကျင့် နိုင်ပါဒယ်။ အိပ်ထ မ တင် ၂၂မျိုးကစားနိုင်ရုံသာမက စက်ဘီးနင်းသကဲ့သို့ပါ ခြေသလုံးကြွက်သားနှင့် ခါးအားကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သောကြောင့် ၂၃မျိုး လေ့ကျင့်နိုင်သော စက်ဖြစ်ပါတယ်။
Amelia Zirmawii Khiangte 1 year ago